Home>Our Services>Projet Logistics>maso
OOG (Out Of Gauge) dia anarana fohy ho an'ireo tavoahangy be loatra na boaty tsy misy fenitra, indrindra fa: vata misokatra malalaka, boaty fisaka (na boaty misy rakitra),
boatin-tsofina, lambam-baravarana hangatsiaka sy fitahirizan-tsaka
Ny sohologist dia manatanteraka ny drafitry ny fitaterana entana mavesatra ho an'ny lozika tetikasa araka ny fisian'ny Open top container sy ny boaty fisaka
Open Top Container （(fantatra amin'ny hoe OT ho an'ny fohy） dia karazana OOG.
Raha jerena ny anarana dia misokatra ny tampon'ity karazan-kaopy ， izay mety ho zaraina roa karazana mahery OT sy malefaka OT noho ireo fitaovana ambony.
Hard OT dia manana tafo vy tsy voasakana eo an-tampony fa ny OT malefaka dia manana vakana azo esorina ary kanonta azo potika eny ambony.
OT mety ho an'ny fitaterana entana lafo vidy be.
Araka ny tarika samihafa fandefasana ， ny cargos tsy misy mihoatra ny 4m ny ekena dia azo ekena.
Flat Rack Container, izay matetika antsoina hoe boaty boaty na boaty FR.
Ny boaty boaty dia miorina amin'ny boaty mahazatra izay esorina miaraka amin'ny rindrina tafo sy rindrina eo amin'ny sisiny.
Raha indraindray dia esorina ihany koa ny rindrina faran'ny ， dia misy takelaka ambany sisa ary tsanganana 4 zorony, antsoinay hoe ilay vata fisaka.
Ny boaty FR dia manana andraikitra lehibe amin'ny fitaterana entana tsy manara-penitra miaraka amin'ireo takelaka matevina matevina mba hahatratrarana ny fahafaha-mavesatra. Izy io dia mitondra maotera milina lava be loatra, be vohoka, mihoatra ny avo be milina na fitaovana ary entana mavesatra.
Araka ny fenitry ny lalantsara samihafa, ny cargos tsy misy mihoatra ny 4.5m ny sakany, azo ekena ny 4g avo be ny cargos. Ary ho an'ny halavany ， Tokony ho ao anatin'ny 15m izany araka ny lanjan'ny entana. Ankoatry ny ， diniho fa ny cargos lava be loatra dia tsy afaka manakana ny fitrandrahana boaty any amin'ny sisiny roa amin'ny faranana (teboka teboka eo amin'ny 2.08m)
Ny cargos dia mila rano sy moistureproof rehefa mameno ny fitoeran-javatra raha ilaina izany satria ny takela-paty fisaka amin'ny ankapobeny dia mametraka amin'ny haavon'ireo vilia fitotoana izay tsy nasiana tombo-kase.
AVOTRA NY FIKAMBANANA GAUGU-CONTAINER
Ny refy anatiny
(MG) 箱 门 开 度 尺寸
(MG) 载重 负荷
Length sakany Haavo sakany Haavo sakany Haavo Max gross dia nampifanintontsintona ny tenany Saran'ny karama farany
Ny sohologist dia manana fiaraha-miasa stratejika mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ireo liners malaza maro toy ny MSK, ZIM, YML, CSCL, WHL, KMTC ary CMA manerantany. Ny SHL dia manana tombony amin'ny asan'ny hetsika matihanina haingana amin'ny teny nindramina ary manompo amin'ny mpanjifany am-pitiavana.
Ny volan'ny fanondranana & fanafarana isan-taona amin'ny OOG dia misy mihoatra ny 800pcs izay mirakotra ny serivisy base manerantany. Ny SHL koa dia manana serivisy ho an'ny famandrihana boaty, ny fanambaràn'ny fomba amam-panao, ny fampidirana anaty, ny fanaraha-maso, ny fanamafisana ary ny fatorana, ny tranofiara, ny fahazoan-dàlana any ivelany, ny varavarana lozika tokana miato ho an'ny tetikasan'ny injeniera mavesatra.
Fepetran'ny OOG sy fanamafisana
1. Ny fitsipiky ny fatorana sy ny fanamafisana mahomby eo anelanelan'ny entana sy ny vatan-dàlana dia ny fisorohana ny entana tsy hivezivezy any amin'ny andaniny roa amin'ny fitoeran-drindrina na hikoranana amin'ny sisiny roa (baffle) mandritra ny fizotrana sy mandeha amin'ny sakana mba hialana amin'ny fahavoazana amin'ny cargos .
2.Izarana ny manangana ny tendron'ny fitoeran-javony (Fandrika) ao anaty boaty ary ajanony ny tendrony iray. Ny sisin'ny baffle dia tsy maintsy haorina na apetraka amin'ny fotoana mitovy.
3.Ny cargos dia tokony halamina moramora eo am-pototry ny hazo fisaka araka ny lanjany. Aza mametraka fihenjanana bebe kokoa amin'ny lafiny iray. Famatorana sy fehezam-borona dia tokony ampiasaina hisorohana ny cargos tsy hitotoana sy hikoritra miadana amin'ny andaniny sy ny andaniny.
Ahenao ny afovoan'ny gravgle matevina raha somary avo dia avo ny afovoan'ny gravitation.
4.Ny mpikirakira dia ilaina eo anelanelan'ny cargos sy ny gorodon'ny fitoeran'entana mba hampitomboana ny kojakoja friction. Ny fanohanana dia tokony hofenoina eo anelanelan'ny cargos sy ny baffles eo amin'ny faran'ny boaty misy ny rindrina mba hisorohana ny hetsika lava lava.
5. Voarara ny handrakotra ireo faritra misy ny Corteur efatra misy ny cargos na ny fanamafisana, izany hoe, ny Fampifarana; Ny elanelana misy eo anelanelan'ny cargos sy ny sakam-bolan'ny boaty dia tokony hitana 30cm, fara fahakeliny, ary ny fatorana ary Tokony hasiana fanamafisana ny fanamafisana, raha tsy izany ny milina misy ny fotsy dia tsy misondrotra amin'ireto entana mavesatra ireto.
6.Ny vesatra isaky ny teboka fanamafisana amin'ny lafiny roa amin'ny vata famonosana dia matetika 5 taonina.
Ny famatorana dia tokony hialana amin'ny fifantohana amin'ny iray amin'ireo teboka fanamafisana.
7.Izarana ny mampiasa fantsika vy mba handroahana ireo matory na ny alim-bary vita amin'ny hazo eo amin'ny gorodona misy ny vata famoahana, mba hialana amin'ny fahasimbana amin'ny takelaka ary hampihenana ny fahaiza-manaony.
8.Ny tariby tariby na fehikibo ny lohany dia tsy maintsy tazonina ao anaty fepetra henjana tanteraka, ny tariby tariby dia tsy maintsy omena vonjimaika turnbuckle ary ny fehikibo ny lohany nylon dia tsy maintsy omena ratchet manohitra tsy miova.
9.Ny marindrano fiarovana dia tokony ampiasaina ho an'ny fifandraisana eo anelanelan'ny tady tariby na fehikibo mamatotra nylon sy ny cargos. Izy ireo matetika dia vita amin'ny plastika (tsy mahazo ampiasaina ny taratasy). Ho an'ireo cargos toy ny coil vy, dia misy sarona vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny varahina vy sy cargos.
10.Ny boaty fisaka, ao anatin'izany raha ny miolikolika ao anaty sisiny roa, dia azo atsipy amin'ny fantsom-pifandraisana amin'ny alàlan'ny fanaon'ny sehatra iraisam-pirenena izany, satria ny fitrandrahana (izany hoe ny fikorisana amin'ny zoro). ny bizina amin'ilay sambo.
Rakitra Flatable 20
Rakitra Flatable 40
Fahafohezana ny harambato fisaka
20Ao ny bokotra ambony indrindra
40Ao ny bokotra ambony indrindra
Famaritana bokotra misokatra